Minecraft Pasi: Microsoft inogadzirisa chaiyo yakatowedzera yemutambo pa Android uye iOS - PhonAndroid.com - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM »Minecraft Pasi: Microsoft inogadziridza chaiyo yechokwadi yemutambo pa Android uye iOS - PhonAndroid.com
The Minecraft universe inoenda kuhupenyu munyika chaiye neMinecraft Earth, mutsva mutsva unobatsira zvichinyanyoitika kuti ugova neruzivo rwechokwadi kune vateereri vemutambo. Minecraft Pasi iri kuuya nokukurumidza kuIndaneti uye iOS. Chiitiko chechizhizha ichi?
Microsoft yaive nayo kunyorerwa Minecraft chaizvoizvo kwakawedzera 6 yapfuura Maypamusangano wekugadzira musangano wayo kuvaka. Sezvakavimbiswa, mutambo wakagadzirwa nhasi pasi pezita Minecraft Pasi ine itsva trailer. Zvinorevei Mojang, mutambi wezvemitambo uye Microsoft, anopa nyore: kufanana neKokémon Goiyo yose Minecraft inoshandura munyika chaiyo nekuda kwekhamera ye smartphone yako. Iwe uchakwanisa Tsvaga nzvimbo yako mukutsvaga mabheji akasiyana-siyana uye zvikwata zvezvivakwa zvako. Zvadaro uwane chero nzvimbo yepamusoro yekuvaka. Ichi ndicho chikonzero chekutanga chechiitiko chinopikira kuva mupfumi nekufadza.
Minecraft Pasi: Zvivharo zveMinecraft zvisikwa pasi mumigwagwa ino zhizha
Minecraft Pasi inopa nzira yakasiyana zvakakwana yokutamba Minecraft pane yako smartphoneasi inoramba iri yechokwadi kune chibvumirano chekudenga. Mutambo wacho wakagadzirwa neInjini yeBhedrock imwe chete. Vatambi havazovhiringidzi nezvinhu zvakasarudzwa. Mutambo wacho unobatanidza chikamu chakasimba chekusangana sezvo zvichizobvira kushamwaridzana neshamwari dzako nokuda kwe " vanoita zvisikwa zvinoshamisa, vovaisa munyika chaiyo ".
Paunotamba munzvimbo imwe chete, unogona kuwana zvinhu zvakafanana neshamwari dzako munzvimbo imwechete nehanzvadzi dzeGPS. Iwe uchakwanisa kurwisa mhuka, kuputsa zvivakwa pamwe chete kuti ubvise zvigadziro, kana kunyange kumira pamberi pe shamwari kuti umudzivise kuuraya mhuka chaiyo, pakati pemimwe mienzaniso.
Minecraft Pasi richave iripo muvhareji yakadzika pa Android uye iOS ino yezhizhapasina tsanangudzo yezuva. Zvinogoneka ku nyora kubhadhadha iyi ikozvino kuti ichengetedzwe pakarepo kana ichivhura. Mutambo wacho unobatana nemapurisa uye mahwendefa ari kushanda pa Android 7 kana iOS 10. Uye pakupedzisira, ichava 100% pasina. Saka chipo chinochengeterwa 90 mamiriyoni evatambi vematambo veMinecraft panguva yemakore 30 emutambo.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.phonandroid.com/minecraft-earth-microsoft-officialise-son-jeu-en-realite-augmentee-sur-android-et-ios.html
🔥 Bouygues Telecom: kusvika kuna 100 € bonus kuti utenge zvakare yako yekare - MobileAndroid.com